बबैइ चिरागार दोभान युवा क्लब र हिरा डागी फाउन्डेसन द्वारा मास्क वितरण
दाङ । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को त्रास फैलिरहेका बेला दाङको दङ्गिशरण गाउँपालिका वडा न : ३ मा हालसालै नवगठित बबई चिरेगार दोभान युवा क्लब र तुलसीपुर ५ दाङमा गठित हिरा डाँगी फाउन्डेसनद्वारा दङ्गिशरण गाउँपालिका वडा नं. -३ एकलीमा मास्क वितरण गरेको छ।
कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष डाँगीले यस क्लबले विगतको दिनहरूमा गरेका कामहरूको प्रसंसा र आगामी दिनहरूमा गर्ने कामहरूमा विभिन्न सामाजिक अभियान्ता, बुद्धिजीवी बर्गहरुको सहयोग रहने र हालै महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस बाट बच्नको लागि भिडभाडमा जाँदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा गायक तथा संगीतकार गोविन्द मधुर आचार्यले क्लबको सहयोग अभियानको प्रशंसा गरेका थिए।
कार्यक्रममा हिरा फाउन्डेसनका अध्यक्ष बम डाँगीले कोरोना सक्रंमण र यसको जोखिम रोकथाम गर्ने उद्देश्यले गाउँमा अत्यावश्यक सेवाबाहेक सर्वसाधारण भिडभाड नगर्न ,साबुनपानी र सेनिटाइजरले नियमित रुपमा हात धुन र निरन्तर रुपमा माक्सको प्रयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
महामारीको रुपमा लिइरहेको कोरोना भाइरसविरुद्ध जनचेतना जगाउँदै सतर्कता बढाउन विभिन्न पक्षहरु सक्रिय छन् । यसैबीच, हामी पनि मास्क वितरणसँगै सचेतना फैलाउने सामग्रीसहित स्थानीयसँग मिलेर काम गरिरहेको फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष भुपेन्द्र डाँगीले जानकारी दिए । विश्वब्यापी रुपमा यो फैलिने क्रम जारी छ । भाइरसको सबैभन्दा बढी प्रभाव अमेरिका र युरोपमा परेको छ । विकसित राष्ट्रले समेत नियन्त्रण गर्न नसकेको यो भाइरस अल्पविकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरुमा यो महामारी फैलियो भने कसरी नियन्त्रण गर्ने यो निकै ठुलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । प्रयाप्त पूर्वतयारी र आवश्यक साबधानी नअपनाउदाँ हामीले ठुलो विपद्को सामना गर्नु परेको छ । तुलनात्मक रुपमा कोरोनाको संक्रमण नेपालमा कम भएपनि जोखिम निकै उच्च छ । नेपालको अहिलेको स्वास्थ्यको अवस्था एवं पूर्व तयारीलाई हेर्दा संक्रमण फैलिएमा नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो छ ।
विश्वमा यस्तो किसिमको महामारी पहिलो पटक आएको होइन । हरेक शताब्दीमा विभिन्न स्वरुपमा यस्ता महामारी आएका छन् । प्लेग, बिफर, एचआइभी÷एड्स, सार्स, इबोला, स्वाइन फ्लु, लगायतका महामारीले विश्वमा करोडौं मानिसको ज्यान गयो । तर पनि विश्वका शक्ति राष्ट्रले विपद् व्यवस्थापन एवं पूर्व तयारी खासै काम गरेको देखिएन । त्यसको गतिलो उदाहरण कोभिड–१९ कोरोना महामारीलाई लिन सकिन्छ । विश्व संकटको घडिमा छ । सबै राष्ट्रहरु अहिले आफ्ना नागरिकलाई कसरी बचाँउने बन्ने चिन्तामा छन । विश्वको एक तिहाइ जनसंख्या लकडाउनमा छ । करोडौं नागरिक बेरोजगार भएका छन् । अहिले संसारभर एउटा बहसको विषय बनेको छ । अर्थतन्त्र बचाउने की नागरिक? अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्र बचाउनकै लागि शक्ति राष्ट्रहरु लागि परेका देखिन्छन । त्यसैले सबैले उच्च सर्तकता अप्नाउन क्लबका अध्यक्ष होमर के.सी.ले जानकारी दिए। कार्यक्रम क्लबका कोषाध्यक्ष ध्रुव डाँगीको स्वागत मन्तव्य बाट सुरु भएको थियो।